Fifidianana: mandray andraikitra ny mpanakanto - Book News Madagascar
Publié août 17, 2018 par Book News
Last updated on septembre 5, 2018
Mahakasika ny daholobe ny fifidianana. Voakasik’izany avokoa rehefa olona mihoatra ny 18 taona, na mpiasa birao, na mpitondra fiara, na mpivarotra, eny, na mpanakanto aza… Nanapa-kevitra ny handray andraikitra manoloana izany ny mpanakanto malagasy.
Fifidianana 2018: famoronan-kira
Mozika. Io no fitaovana entin’ireo mpanakanto andraisana andraikitra manoloana ny tsy faharisihan’ny olom-pirenena hifidy. Mpanakanto 50 araka izany no nifandrimbona hamorona hira sy horonantsary iray hanentanana ny olona hifidy. Ny fifidianana izay hatao amin’ny 7 novambra izao ny fihodinana voalohany ary ny 19 desambra izao ny fihodinana faharoa.
Sady fanabeazana no fanentanana no ihany koa fampivoarana ny ara-kolontsaina ity famoronan-kira ho an’ireto mpanakanto ireto.
Hafatra anatin’io hira io ny famporisihana ny tsirairay hifidy.
A post shared by Book News Madagascar (@booknewsmadagascar)
“Andao hifidy, adidy io, safidinao io! Na vato fotsy aza tsy maninona! Ny zava-misy mantsy, ny olona tsy maharisika hifidy nefa izay lany eo mahasosotra foana. Ilaina anefa ny mifidy”, hoy i Bekoto, mpamorona ny hira.
“Izahay artista eto tsy hoe hanao “propagande”, na hoe mirona amin’ny antoko, fa manao fanentanana”, hoy izy nanamafy.
Fampivoarana ny ara-kolontsaina
Araka ny nazavain’i Bekoto ihany koa, fifandrimbonana sy fiaraha-miasan’ireo mpanakanto ity famoronan-kira ity.
Somary hiavaka ny gadon-kira satria sady misy feon-java-maneno maromaro (symphonie), misy sôva, misy “rap”, misy “slam”, misy beko… Nafangaro izy ireo mba hampiavaka ny feon-kira. Hita taratra araka izany ny fivoarana ara-kolontsaina amin’ny alalan’ny fampifangaroana endrika mozika samihafa.
Kendrena hivoaka amin’ity faran’ny volana aogositra ity moa ilay hira sy ilay horonantsary.
[amazon_link asins=’B071771VPS,B07CZGW8JH,B07BNTSJHD,B01N0L83XV’ template=’ProductCarousel’ store=’booknewsmada7-21′ marketplace=’FR’ link_id=’e7ca61d5-a225-11e8-9760-bbdb5fe6edda’]Tafiditra anatin’ny paikadin-tserasera amin’ny fifidianana eo anivon’ny tetikasa Fanoa na Fifidianana andraisan’ny olom-pirenena andraikitra moa ity famoronan-kira ity, araka ny fanazavan’i Hariniaina Rakotobe, mpiandraikitra ny seraseran’ny fiarahamonim-pirenena Rohy.
“Izy ity dia fanentanana ny olona handray andraikitra: manentana ny olona hifidy, handinika vao hifidy, ary hiaro ny safidiny amin’ny alalan’ny fanaraha-maso ny fifidianana”, hoy i Hariniaina Rakotobe.
Ankoatran’ny hira, mbola hisy endri-panentanana hafa hatao eny anivon’ny fiarahamonina rehetra eny mandrapahatongan’ny fifidianana.
Publié dans Actualités, Culture et sport et Politique